Mareykanka & xulafadiisu waxay Shiinaha ku eedeeyeen inuu wado olole uu ku dhibaataynayo internetka - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Mareykanka & xulafadiisu waxay Shiinaha ku eedeeyeen inuu wado olole uu...
Mareykanka & xulafadiisu waxay Shiinaha ku eedeeyeen inuu wado olole uu ku dhibaataynayo internetka
Muqdisho , July 19 (Walwaal.com) – Maraykanka iyo isbahaysiga xulafada la leh ayaa Shiinaha ku eedeeyey isniintii olole caalami ah oo internetka lagu jabsanayo oo ay wadaan kooxo uu qandaras siinayo, gaar ahaan ku lug lahaanta jabsiga lagu beegsanyo Microsoft, taasoo la ogaadey sanadkan horaantiisii in kooxahaasi ay u shaqeeyaan Beijing.
Waxaa la furay aag cusub oo xiisadeed oo ka dhexeeya Shiinaha & Mareykanka oo ay weheliyaan xulafadiisa NATO, Midowga Yurub, Britain, Australia, Japan, New Zealand iyo Canada si kor loogu qaado eedeymaha.
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Anthony Blinken ayaa yiri “Mareykanka iyo dalalka adduunku waxay kula xisaabtamayaan Jamhuuriyadda dadka Shiinaha qaab-dhaqankeeda mas’uuliyad darrada ah, carqaladeynta, iyo xasillooni darada ay ku hayaan aaladda internetka. Ayuu ku yiri war qoraal ah oo Isniintii ka soo baxay.
Sidoo kale Isniintan, Waaxda Caddaaladda ee Mareykanku waxay sheegtay in afar muwaadin oo Shiineys ah – seddex sarkaal oo amniga ah iyo mid jabsade ah lagu soo oogay eedo ah in ay wadeen sidii ay u bartilmaameedsan lahaayeen daraasiin shirkado ah, jaamacado iyo hay’ado dowladeed oo ku yaal Mareykanka iyo wadamada kale.
Hawlahaa ayaa dhacay intii u dhaxeysay 2011 iyo 2018 kuwaas oo lagu ogaaday macluumaadyo in ay si weyn uga faa’iideysteen shirkado iyo ganacsato Shiine ah. ayay lagu yiri warbixinta
Furitaanka wejigan cusub oo ka mid ah dagaalka dowladuhu isku hayaan ee ka dhanka ah jabsiga ayaa yimid bil kadib markii G7 iyo hogaamiyeyaasha NATO ay kula heshiiyeen madaxweyne Joe Biden shirarkoodii ka dhacay Cornwall, England, iyo Brussels iyagoo ku eedeeyay Shiinaha inay caqabado waaweyn ku hayso nidaamka aduunka.
Dowladuhu waxay si rasmi ah ugu nisbeeyeen inay faragelin ku sameysay Microsoft Exchange Server sida la shaaciyay bishii Maarso taas oo ay sameeyeen “budhcada internetka ee gacansaarka la leh” Wasaaradda Amniga ee Shiinaha, sida uu yidhi Blinken
Safaaradda Shiinaha ee Washington kama ay jawaabin codsi loo diray oo ahaa inay faalo bixiyaan. Saraakiisha Shiinaha ayaa horay u sheegay in Shiinuhu sidoo kale dhibane u yahay jabsiga oo uu ka soo horjeedo dhammaan noocyada weerarada internetka.
Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in baaxadda ay leedahay jabsiga loo aaneynayo Shiinuhu uu ka yaabiyey, sida Shiinuhu u adeegsanayo ” dembiilayaasha qandarasleyda wax-jabsada”
“PRC’s Wasaaradda Amniga (MSS) waxay samaysay degaan & nidaamka ay ku shaqeeyaan dembiilayaashu kuwaasoo fulinaya howlo ay dowladdu maalgeliso oo ah dambiyada internetka si ay u hesho danaheeda dhaqaale,” ayuu yiri Blinken.
Hay’adaha amniga iyo sirdoonka Mareykanka ayaa soo bandhigi doona in ka badan 50 farsamooyin iyo habab ay adeegsadaan “denbiilayaasha ay dowladda shiine maalgeliso ” kuwaa oo ay u adeegsadaan beegsiga shabakadaha Mareykanka.
warbixinta oo dheer darteed waxaan ku dhaafnay intan, waxaan kasoo xiganay Reuters: Steve HollandDavid Shepardson. Af-celintii :H.M.Dhiillood
Next articleQaar ka mid ah dagaalyahanka Mareykanka oo sheegaya in dhiigii lagu daadiyay Afghanistan uu khasaare ahaa